Ogaden News Agency (ONA) – Denmark oo Si diiran looga xusay Sanad Guuradii 29aad ee kasoo wareegtay Aas aaskii JWXO.
Waxaa xalay oy taariikhdu ahayd 7/09/2013, laguqabtay caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen munaasabad siwanaagsan loosoo agaasimay oo lagu xusay Sanad–Guuradii 29aad ee kasoo wareegtay aas aaskii Jabhada Wadiniga Xoraynta Ogadenya (JWXO).
Munaasabadan oo si wanaagsan loosoo abaabulay ayna kasoo wada qaybgaleen dhamaan qaybaha Jaaliyada Denmark ka kooban tahay sida ururka Hooyooyinka, ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU). Waxaa kale oo munaasabadan goob joog ka,ahaa qaar kamid ah shacabka Somalida Ogadenia oo kakala yimid gobolada fog fog ee wadankan Denmark sida Odense.
Waxaa xusid mudan inay munaasabada kahadleen qaar kamidah marti sharaftii Soomaaliyeed ee lagu marti qaaday munaasabadan. Waxayna masuuliintii hadashay aad ugu nuux nuusadeen amaan iyo bogaadin balaadhana usoo jeediyeen guud ahaan shacab waynaha Soomaalida Ogadeenya gaar ahaan madaxda iyo hawl-wadeenka Jaaliyadaha S.Ogadenya oo runtii muujiyay karti iyo bisayl mudadii 29 sano ahayd ee halganka Ogadeenya uu socday.
Dhanka kale waxaa munaasabada lagusoo bandhigay barnaamij maqal iyo muuqaal ah ooy xubno Jaaliyada Denmark kamid ah kasoo diyaariyeen Xaalada Nololeed eey kusuganyihiin boqolaal kamid ah Somalida Ogadenia ee uqaxday xeryaha qaxootiga ee dalkan Kenya xilli ay waftigu hawlo shaqo kutageen bariga afrika. Cajaladan oo runtii aad udhaqaajiyay dareenka iyo shucuurka shacabwaynihii munaasabada kasoo qaybgalay ayaa ahaa mid sida dhabta ah ooga turjumaya xaalada uu shacabka Somalida Ogadenia kusugan yahay iyo dhibaatooyinka arxan darrida ah ee Ciidanka Gumaysiga Itoobiya uu kuhayo bulshada rayadka ah ee kudhaqan wadanka Ogadenia.
Waxaa munaasabada kahadlay oo khudbado iyo baraamid aah uxiiso iyo xamaasad badan kasoo jeediyay maamulka Jaaliyada iyo Masuul kamid ah Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia. Waxaa kamid ahaa Masuuliinta xafladan kahadashay Mudane Maxamad Macalin oo socdaan gaaban kuyimid dalka Denmark, Marwo Astaahil Xirsi Mahad oo iyadu kaalin wayn kaqaadatay doorka ay kuleeyihiin Hooyooyinka Somalida Ogadenia, Mudane Cabdullahi Ileeye, Shekh Xasan, Gudomiyaha Jaaliyada Denmark Mudane Cumar Shekh Maxamad iyo Mudane Xasan Macalin. Dhamaan masuulintu waxay aad oogu bogaadiyeen shacabkii madasha soo buuxdhaafiyay in midnimada iyo kaqaybqaadasha hawlaha halganka laxoojiyo si loogaadho xornimada Ogadenia Inshaa Allah.
Guud ahaan munaasabadan ayaa kusoo dhamaatay guul iyo waliba is afgarad wanaagsan, waxaana laysku afgartay inay Jaaliyadu sii laba jibaaraan waajibaadkoodii iyo hawlihii ajendaha ugu jiray si xirfadaysana uga qayb qaataan hawlaha halganka oo meel wanaagsan maraya.
F.G: Waxaad naga sugtaan barnaamid maqal iyo muuqaal ah oo aad uxiisa badan haduu eebuhu yiraahdo.